15 Ephreli - 28 Ephreli 2016 (IsiZulu)
15 Ephreli - 28 Ephreli 2016 Iphephandaba lakho laMAHHALA www.durban.gov.za
USUQALILE UMTHETHO WAMABHISHI
Ezezimali: Ikhasi 9-12
IKHASI LESABELOMALI NGAPHAKATHI
Izindaba: Ikhasi 2 CHARMEL PAYET Ukusebenza kwamabhasi kaMasipala okusingethwe yinkampani ezimele uTansnat sekubuyele esimweni. Lokhu kwenzeke ngemuva kokungenelela kukaMasipala okubandakanya nokuvumelana phakathi kukaMasipala nenkampani ewasingethe ngokufanele kwenziwe. Ezinyathelweni ezathathwa ngoJanuwari kubalwa ukubunjwa kwethimba lokungenelela ukubeka iso ezimalini zokusebenza kwamabhasi kanye nokuphatha ngokuhlanganyela i-akhawunti entsha yasebhange kaTansnat ezoqinisekisa ukuthi izimali zisetshenziswa ngokuyikho. Isivumelwano abasisayina bobabili ngoJanuwari kwakungesokuqinisekisa ukuthi ngeke kusaba nabuhixihixi ekusebenzeni kwamabhasi. Lesi sivumelwano senziwa umyalelo wenkantolo owahlehlisa isicelo esasifakwe uMasipala sokuba inkantolo ikhiphe umyalelo wokuhlakaza uTansnat nakh o konke okwakhe ngesikhathi kusabhekisiswa ukuthi ngubani okweleta omunye phakathi kukaMasipala noTansnat futhi umkweleta malini. Lesi sivumelwano sihlinzekela nokuqokwa kwabameli abazokwengamela izindaba zokukhokhelana izimali phakathi kuka Masipala noTansnat ababizana zona. Khona maduze nje kuzoqokwa nomlamuli ozimele ozokwahlukanisa inhloko nesixhanti asho ukuthi lowo nalowo umkweleta malini omunye nokuthi lezi zikweletu zizokhokhwa kanjani. Ukungenelela okuqaliwe kulandele ubuhixihixi obuningi ekusebenzeni kwamabhasi ngemuva kokuphela kukadizili nokuhola kwabasebenzi ngemuva kwesikhathi. Ibanga elihanjiwe ekuhlelekeni kokusebenza kwamabhasi lethulwe yiMenenja yeDolobha uSibusiso Sithole emhlanganweni woMkhandlu ophelele mhla ka-31 Mashi 2016. USithole uthe ithimba lokungenelela ukubeka iso ekuphathweni kwezimali kukaTansnat seliyasebenza liholwa uKPMG. ?Sekuphothiwe ukuvulwa kwe-akhawunti entsha yasebhange ezoqinisekisa ukuthi izimali zisetshenziswa ngokuyikho.? charmel.payet@durban.gov.za
Ukungenelela kolwamabhasi kuthela izithelo
UMengameli Jacob Zuma usememezele ukuthi umhlaka 3 Agasti 2016 yilona usuku lokuvotela oHulumeni baseKhaya. Kusukela mhlaka 4 kuya kumhlaka 16 Ephreli 2016, ubuholi bukaMasipala weTheku, obuholwa yiMeya uJames Nxumalo bebuphume inqina yokukhuthaza abahlali baseThekwini ukuba babhalisele ukuvota ukuze bezokwazi ukuvota okhethweni oluzayo. Isithombe: THEMBA KHUMALO
Ube Yimpumelelo Owokubhalisela Ukuvota
ITheku lizobamba eyeNgculazi
ROMITA HANUMAN IMIGWAQO yeTheku iphenduke ingqungquthela encane ngoLwesihlanu ngomhlaka 8 Ephreli 2016 kubonakala ngemibala ephuzi ngenkathi kunombuthano wokubungaza izinsuku ezingu-100 ngaphambi kokuba kuhlale iNgqungquthela yeNgculazi (AIDS Conference) ka-21. Le ngqungquthela yezinsuku eziyisihlanu izobanjelwa eNkosi Albert Luthuli International Convention Centre kusukela mhlaka 18 kuya ku-22 Julayi 2016. Abaholi bezombusazwe, izinhlangano zomphakathi, izishoshovu zeNgculazi, izifundiswa namlungu omphakathi bahlangane ndawonye bebhebhezelisa amafulegi nemiyalezo yokweseka labo abahaqwe yisifo sengculazi kumbuthano obusuka eKing Dinuzulu Park uya eGugu Dlamini Park. ITheku lizokwamukela izithunywa ezilinganiselwa ku-20 000 ezizobe ziqhamuka kulelizwe nasemazweni omhlaba ngaphansi kwesiqubulo esithi ?Access Equality Right Now!?, lapho izifundiswa, ososayensi, iziphathimandla, abaholi bakahulumeni kanye nalabo ababambe iqhaza emiphakathini bezodingida ngezindlela zokulwa nokusabalala kwegciwane lesandulela-ngculazi (HIV). INingizimu Afrika kuningi okuhle engakusho. Lawo ngamazwi ePhini likaMengameli uCyril Ramaphosa, obuye abe nguSihlalo weSouth African National AIDS Council. ?Namhlanje sinikeza ngama-ARVs kubantu abangaphezu kuka-3000 000 abanesifo sengculazi futhi kuyasijabulisa ukuthi ukusuleleka komntwana ngegciwane ngenkathi ezalwa sekwehle kakhulu. Sifuna ukwenza ingculazi ibe ngumlando ezweni lethu,? kusho uRamaphosa kumyalezo wakhe oqoshiwe obubukwa eGugu Dlamini Park. i-AIDS 2016 yingqungquthela eletha ithemba, kusho uNdunankulu waKwaZulu- Natali uSenzo Mchunu. ?Sinethemba lokuqhubeka nokuqwashisa abantu, sigqugquzele abantu ukuze sikwazi ukuqeda ngengculazi ngo-2030.? iMeya yeTheku enguSihlalo we-EThekwini AIDS Council, uJames Nxumalo, ithe igciwane lesandulelangculazi nengculazi kuyingozi enkulu kubantu. ?Siyajabula ukuthi udaba olubaluleke kangaka luzodingidwa lapha endaweni yakithi futhi okuyinto ezokwenzeka emazingeni esayensi nezenhlalo. Ukusingatha le ngqungquthela kuyindlela yeTheku yokuzama ukulwa nalesi sihlava.? romita.hanuman@durban.gov.za
ON THE 2016/17 BUDGET